Arduino MKR WAN 1300 iyo Arduino MKR GSM 1400, looxyada cusub ee IoT ee Mashruuca Arduino | Qalabka bilaashka ah
Inta lagu jiro maalmahan Carwadii ugu Muhiimsaneyd ee Abuuraha sanadka ayaa ka dhacday magaalada New York. Carwo ay ku soo bandhigeen mashaariicdooda iyo qalabkooda cusub barnaamijyo caan ah oo aan caan ahayn. Arduino sidoo kale wuxuu joogay Carwadan wuxuuna soo bandhigay labo guddi oo cusub oo ka tirsan qoyska Arduino.
Taarikadaas waxaa loo yaqaan Arduino MKR WAN 1300 iyo Arduino MKR GSM 1400. Laba guddi oo yaryar oo diiradda saaraya adduunka IoT oo runti ka caawin doona adeegsadaha inuu sameeyo mashruucyo caqli-gal ah ama ugu yaraan ka qaybgalo Internetka Waxyaabaha.
Guddiga MKR WAN 1300 wuxuu leeyahay xiriir isgaarsiin wireless ah oo ku lifaaqan qaabeynta guddiga MKR Zero Board, taasi waa, waxaan taageero u heli doonnaa codsiyada 32-bit ah. Astaamaha saxanka 256KB xasuusta flash iyo 32KB SRAM. Waxay ku socon kartaa awooda laba baytariyada 1,5V oo dhammaantood cabirkoodu yahay 67,64 x 25mm. Markaad yeelato wada-xiriirka wireless, aaladda aad ku xiran tahay waxay yeelan doontaa ikhtiyaar ay kula xiriiraan internetka.
Golaha Arduino MKR GSM 1400 waa ikhtiyaar raacaya wadada mashaariic badan oo IoT ah. Saxankan, sida loo soo gaabiyay, waxaa ku jira module GSM ah oo u oggolaan doona isku xirnaanta fog iyada oo aan loo baahnayn router, kaliya oo leh kaarka taleefanka gacanta. Naqshadeynta inta kale ee guddiga waxay la mid tahay MKR Zero Board, laakiin isticmaalka tamarta la mid ma ahan guddiga MKR WAN 1300, oo ka sarreeya. Saxanka MKR GSM 1400 waxay u baahan tahay ugu yaraan hal batari 3.7V LiPo ah si ay si sax ah ugu shaqeyso. Kordhinta tamarta waxaa sabab u ah habka loo yaqaan 'GSM module' ee guddiga uu leeyahay laakiin tani macnaheedu maahan koror cabbirka, oo leh cabir la mid ah kan loo yaqaan 'MKR WAN 1300 board'.
Labadan moodel ee cusub ee looxyada Arduino waxaa loo habeyn karaa iibsashada iyadoo loo marayo bogga rasmiga ah ee Arduino. Guddiga MKR WAN 1300 wuxuu leeyahay kharash dhan 35 euro halka guddiga MKR GSM 1400 uu leeyahay kharash dhan 59,90 euro. Laba qiime oo macquul ah hadaan tixgalino tayada taarikada iyo bulshada badan ee mashruucani leeyahay. Marka waxay umuuqataa in Arduino uu wali udagaalamayo abuuritaanka jawi xor ah IoT. Si kastaba ha noqotee Guddiyadan ma lahaan doonaan guul la mid ah Arduino Yún? Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Arduino MKR WAN 1300 iyo Arduino MKR GSM 1400, looxyada cusub ee IoT ee Mashruuca Arduino
NanoDimension wuxuu soo bandhigayaa DragonFly 2020 Pro cusub